Xiisadda ka dhalatay hadalkii Trump ee biya xireenka Itoobiya oo cirka isku sii shareertay – Calanka.com
in Dibedda — October 25, 2020
Dowladda Itoobiya ayaa ka dalbatay Mareykankaay inay sharaxaad ka bixiyaan hadal ka soo yeeray madaxwayne Donold Trump.
Mr. Abiy Ahmed si toos ah ugama jawaabin hadalka Trump, balse waxaa muuki shaki ah waxa ku kalifay Mr Trump hadalka uu sheegay.
Dr. Abiy ayaa wacad ku maray in Itoobiya ay dhameystiri doonto Biya-xireenka.
Hadalka rai’sul wasaaraha Abey Axmed ayaa ka dambeeyay ka dib markii madaxweynaha waddanka Mareykanka, Donald Trump, uu sheegay hadal guux badan ka kicyay gudaha waddanka Itoobiya. Trump ayaa tilmaamay in Masar ay burburin karto biyo-xireenka wayn ee ay Itoobiya ka dhinac dhisayso Webiga Nile.
Dhanak kale ra’iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, Hailemariam Dessalegn, ayaa si caro leh arrintaas uga falceliyay.